ချစ်ကြည်အေး: ဘယ်လို ရောက်ရောက်ပေါ့....
Kuala Selangor, Selangor arrived from google.com.my on "ချစ်ကြည်အေး: ဖျားတဲ့ည..." by searching for ပါရာစီတမော့.
13:18:31 -- 43 minutes ago
Singapore arrived from google.com on "ချစ်ကြည်အေး: ဘာလီ ခရီးစဉ်-၂" by searching for ချဉ်စော်ကားသီး.
15:27:17 --7minutes ago
Bangkok, Krung Thep arrived from google.co.th on "ချစ်ကြည်အေး: ကျမ ရင်ထဲက အတွေးစများ..." by searching for လေးလုံးစပ်ကဗ%E.
15:23:15 --5minutes ago
Skövde, Vastra Gotaland arrived from google.se on "ချစ်ကြည်အေး: ဘာလီ ခရီးစဉ်-၁၀ (အပြီး)" by searching for ခရီးစဉ်.
22:42:32 -- 10 hours 8 mins ago
Colombo, Western arrived from bing.com on "ချစ်ကြည်အေး: ကျမနှင့် သူခိုးဖမ်းခြင်း" by searching for ...
22:08:25 --2minutes ago
Dumas, Texas arrived from google.com on "ချစ်ကြည်အေး: ဒုံရင်း" by searching for ဇွဲကပင်တောင်.
11:03:52 -- 30 minutes ago
Cary, North Carolina arrived from google.com on "ချစ်ကြည်အေး: ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ..." by searching for အစိမ်းရောင်��%9.
03:04:22 --5hours 29 mins ago
Myanmar arrived from search.conduit.com on "ချစ်ကြည်အေး: အလှကိုယ်စီ..." by searching for မဟာဆန်သူ.
15:45:26 -- 1 hour 11 mins ago
Bangkok, Krung Thep arrived from google.co.th on "ချစ်ကြည်အေး: သူ့အကြိုက် (သို့မဟုတ်) ကျမ ချက် မိ....(အပိုင်း ၁)" by searching for ဝက်ခြေထောက်.
04:14:29 --4hours 21 mins ago
အိမ်း...ရှာတာက တခြား ရောက်လာတာက တနေရာ...
ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ...
ယွန်း Thu Aug 12, 10:45:00 PM GMT+8
ဟဟဟ...ရယ်ရတယ် .. တိတိကျကျကို ရှာပေးကြပါတယ်..: p
ကလူသစ် Thu Aug 12, 11:28:00 PM GMT+8
google တို့ဘာတို့ သေသေချာချာလုပ်ပေးသင့်ပြီ။ ခုလိုမတော်တဆရောက်ရောက်လာတော့ အိမ်ရှင်ခမျာ မချိပြုံးလေးနဲ့ :)
T T Sweet Thu Aug 12, 11:45:00 PM GMT+8
Life traffic feed ကနေ ရတာလား ...ရှာထားတာတွေက ရယ်ရတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ ... တ်ို့လဲ အဲလိုရှာရင်းနဲ့ ပို့စ်လေးတွေ ကြိုက်ရင် ဆက်ဖတ်မိတာပဲ ...
blackroze Fri Aug 13, 12:49:00 AM GMT+8
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Fri Aug 13, 12:52:00 AM GMT+8
ရယ်စရာတွေ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးဗျာ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Aug 13, 01:33:00 AM GMT+8
ညီမကတော့ ဘာမှ မရှာဘဲ အစ်မဘလော့ကို သက်သက်လာတာပါနော်.. တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် ရောက်လာရတာ မဟုတ်ရပါ။ တည့်တည့်ကြီးကို လာခဲ့ပါတယ်..း)
rose of sharon Fri Aug 13, 11:23:00 AM GMT+8
Thant Fri Aug 13, 11:42:00 AM GMT+8
ဟားဟား....ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ..... :D
khet myint myint Fri Aug 13, 12:15:00 PM GMT+8
ဒေါက်တာချက်ကြီး တော့သိတယ် ၊ ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူး သူခိုးဖမ်းတာနဲ့.. လူကြီးကြိုက်တွေနဲ့.. ဟင်းး
Anonymous Fri Aug 13, 12:33:00 PM GMT+8
အမချစ်ကြည် ဖတ်ပြီးရီလိုက်ရလို့ကျေးဇူး အာဘွားးး မွ မွ မွ
မောင်မျိုး Fri Aug 13, 12:44:00 PM GMT+8
အမ် ...ဒါဆို ဒုံရင်းအ ကြီးကြီးပေါ့ ဇွဲကပင်တောင်ကြီး အဟိ ပေါဖော်ပေါဖက်ရတာပေါ့ဗျ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်း)
ဝက်ဝံလေး Fri Aug 13, 03:20:00 PM GMT+8
ခွီးးးး ဟိဟိ ရယ်သွားတယ် ဟဟဟဟ
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရှာနည်း ဟက်
ချိုကျ Fri Aug 13, 08:58:00 PM GMT+8
အနော်လည်း အစ်မချောလိုပဲ တည့်တည့်ကြီးကို လာသွားပါတယ် ခင်ညား :)
အင်ကြင်းသန့် Fri Aug 13, 10:52:00 PM GMT+8
ဂျင်းစုတ်လေး arrived from Boon Lay MRT on "ချစ်ကြည်အေး's house" by searching for စားစရာသောက်စရာ....:P :P :P
TURN-ON-IDEAS Fri Aug 13, 11:10:00 PM GMT+8
အစ်မဂျင်း please add me!!! :))
သက်ဝေ Sat Aug 14, 10:00:00 AM GMT+8
အားလုံးထဲ ဂျင်ဂျင်းရဲ့ ဘယ်လိုရောက်ရောက်က အမိုက်ဆုံးပဲ...း))
ကိုကိုးအိမ် Sat Aug 14, 04:35:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်ရေ ဘယ်ကမှရှာလာတာဟုတ်ဘူးနော် ချိတ်ထားတဲ့လင့်ခ်ကနေ အပေါ်တက်လာလို့လည်လည်လာတာပါ။ အစပိုင်းဖတ်နေတုန်းကနားမလည်ဘူး ဘာပါလိမ့်ပေါ့။ နောက်တော့ မှ သြော် ဟားဟားဟား ဆိုပြီး သဘောပေါက်သွားတယ်။ အဟင်း ရှာတာတွေ နဲ့ ရောက်လာတာတွေက တခြားစီတွေနော် တစ်ခါတစ်လေ ကိုကိုးအိမ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာလိုက်ရင် ကိုရီးယားမင်းသားပုံတွေပေါ်ပေါ် လာတယ် အဲဒါရုပ်ချင်းတူလို့များလားမသိ
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) Sat Aug 14, 05:27:00 PM GMT+8
ကိုယ့်ခြံထဲရောက်မှတော့ ကိုယ့်ကြက်မပေါ့။ အင်းး ကြက်ဖကြီး ခြံထဲရောက်ခဲ့ရင်ကော အမ။ အဟီး။ စတာနော်။ စိတ်မဆိုးနဲ့။
ညီမလေး Sat Aug 14, 07:25:00 PM GMT+8
ကိုယ့်ကြက်မပဲ ဆိုပြီး ချက်တော့မစားနဲ့နော်းP
မီးမီးကတော့ ဘယ်ကမှမရှာပဲ တန်းရောက်လာတာပါး)
ချစ်ကြည်အေး Sat Aug 14, 08:19:00 PM GMT+8
တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီး လာခဲ့၊ မန့်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်....:))
Z Sat Aug 14, 11:31:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေး ဘလော့ကို " ၀င်လာမစဲ တသဲသဲဆိုတဲ့ " ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်စင် လုပ်ထားသလားမသိဖူး
ပေါ့ဆိမ့် Sun Aug 15, 09:03:00 AM GMT+8
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးပေါ့ အမရာ ...
စုချစ် Sun Aug 15, 10:33:00 AM GMT+8
ရှာတဲ့ category တွေက တခုနဲ့ တခု မတူပဲ ပြထားတာ ... ဟီး...
ဇွန်မိုးစက် Sun Aug 15, 11:04:00 AM GMT+8
ဇွန်က ကိုယ့်အကြိုက်ထမီပို့စ် ကနေ ရောက်လာခဲ့သူ။း)
Hla Fri Nov 26, 11:45:00 PM GMT+8
အစမရှိ အဆုံးမရှိ ဖတ်လိုက်မိတဲ့ကျွန်တော် မှာ ဘာစာတွေမှန်းလဲမသိဘူးလို့ဆိုပြီး သက်ပြင်းချမိပါတယ်